Ny vidiny dia mety hiova arakaraka ny famatsiana sy ny antony hafa amin'ny tsena. Handefa lisitry ny vidiny nohavaozina izahay rehefa mifandray aminay ny orinasanao raha mila fanazavana fanampiny.
Ho an'ny santionany, ny fotoana fitarihana dia eo amin'ny 7 andro. Ho an'ny famokarana faobe, ny fotoana nitarika dia 20-30 andro taorian'ny nandraisany ny fandoavam-bola. Lasa mandaitra ny fotoana fitarihana rehefa (1) nahazo ny petra-bola nataonao izahay, ary (2) nahazo ny fankatoavanao farany momba ny vokatrao izahay. Raha toa ka tsy mifanaraka amin'ny fe-potoanao ny fotoam-pitantananay dia diniho azafady ny zavatra takinao amin'ny fivarotanao. Amin'ny toe-javatra rehetra dia hiezaka hanome izay ilainao izahay. Amin'ny ankamaroan'ny tranga dia afaka manao izany isika.